Ny Minisitry ny Fizahantany Jamaika dia nandefa fiaraha-miory tamin'ny fianakavian'i Melody Haughton-Adams
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny Minisitry ny Fizahantany Jamaika dia nandefa fiaraha-miory tamin'ny fianakavian'i Melody Haughton-Adams
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Edmund Bartlett dia mirary fiononana feno ho an'ireo havana sy naman'i Melody Haughton-Adams, Filohan'ny Fikambanan'ny Mpivarotra sy Mpamokatra asa tanana manerana ny Nosy, izay nodimandry androany noho ny aretina.
Haughton no filohan'ny Fikambanan'ny Mpivarotra sy Mpamokatra asa tanana manerana ny Nosy nandritra ny roapolo taona mahery.
Izy dia filohan'ny tsenan'ny Harbor Street Craft ao Montego Bay nandritra ny am-polony taona maro.
Nafana fo tamin'ny fampivelarana ny indostrian'ny asa tanana i Melody ary lasa olo-malaza eo amin'ny sehatry ny fizahantany nandritra ny taona maro.
“Ny melody dia olo-malaza eo amin'ny indostrian'ny fizahantany nandritra ny taona maro ary tena nazoto tamin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny asa tanana. Olombelona niavaka izy ary tena halahelo an'izay rehetra nanana tombontsoa nahafantatra azy. Amin'ny anaran'ny Minisitry ny fizahan-tany ary ny sampan-draharaham-panjakana rehetra ao aminy, noho izany dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviany sy ny namany aho mandritra izao fotoan-tsarotra izao”, hoy ny minisitra Bartlett.
Haughton dia filohan'ny Fikambanan'ny Mpivarotra sy Mpanamboatra asa tanana manerana ny Nosy nandritra ny roapolo taona mahery ary niasa ho filohan'ny tsenan'ny Harbor Street Craft tao Montego Bay nandritra ny am-polony taona maro.
"Ny fitiavan'i Melody amin'ny indostrian'ny asa tanana, ary amin'ny fanitarana ny fizahan-tany, dia tena tsy manam-paharoa ary ny indostriantsika tsy ho toy izany koa raha tsy misy azy. Enga anie ny fanahiny hihavana amin’ny Raintsika any an-danitra”, hoy ny Minisitra Bartlett.